Sanbaloolshe oo Kahadley xil ka qaadistiisa ku macneeyey Mid Siaaysadeed+ COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sanbaloolshe oo Kahadley xil ka qaadistiisa ku macneeyey Mid Siaaysadeed+ COD
Abdilaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugida Qaranka Soomaaliya ayaa ka hadlay xil ka qaadistii dhawaan Golaha Wasiirada ay ku sameeyeen isaga, xilli uu la hadlaayay Idacada VOA.
Sanbaloolshe Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugida Qaranka, ayaa ku tilmaamay go’aanka looga qaaday xilka inuu ahaa mid lagu deg-degay oo aan laga fiirsan, isaga oo muujiyay sida uu kaga xun yahay xil ka qaadista Golaha Xukuumadda ay ku sameeyeen.
Wuxuu ku tilmaamay in isaga xilka laga qaado go’aan aan laga fiirsan iyo sidoo kale go’aan siyaasadeesan, maadaama uu sheegay inuu kusoo dhex-dhacay dagaal siyaasadeed oo markii hore taagnaa, inkastoo uu ka gaabsaday inuu faah-faahiyo cida uu udhaxeeyo dagaalkaasi Siyaasadeed.
“Go’aanka waa mid aan laga fiirsan oo lagu deg degay go’aan iska siyaasadeesan ayuu ahaa, mar marka qaarkood markii la iisheegay go’aanka Golaha Wasiirada ay soo jeedinaayeen inay ku doodeen xilka ay iga qaadeen cabsi la iga qabo oo sida madaxda qaar ay sheegeen, war ninkaan hadaan la iska qaban anaga ayuu na xirayaa dood ah ayaa jirtay”Ayuu yiri Sanbaloolshe.
Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya ayaa qirtay in ciidamada Nabadsugida Soomaaliya ay xabsiga dhigeen Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, balse wuxuu ku cudur daartay in falkaasi uu udhacay si kama’ ah ama kedis ah oo durba lasii daayay Xildhibaanka, markii sida uu sheegay uu maqlay xariga Xildhibaanka uu isaga sii daayay.
C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa meesha ka saaray jiritaanka wararka ku aadan in ergo dhanka xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ka socotay oo xariga Xildhibaanka kala hadli rabtay isaga inuu aflagaadeeyay, wuxuuna sheegay in arintaasi ay tahay mid waxba kama jiraan ah.